Kayd biyo ah - Qeybta 2 | Laga soo bilaabo Linux
Hadda waxa xiisaha leh ee squid sameeyaa waa kayd (fikradayda). Waad ii sheegi doontaa sababta kaydka? Sababtu way fududahay, sifiican u maaree isticmaalka isticmaalka xawaarahaaga iyo xawaarahaaga waa waxa ugu weyn. Si taxaddar leh uga fikir, 1000 qof oo shirkaddaada ah oo la tashanaya 5-tii daqiiqaba mar, bogagga guud, Google, Hotmail, Gmail, iwm ... si aad u soo dejiso sawirro, boorar, xayeysiin, html waxyaabaha soo noqnoqda, kuwan oo dhammi waa waxyaabo taagan, maya Iyagu si isdaba joog ah ayey isu beddelaan, si ka wanaagsan in iyaga lagu keydiyo shabakaddaada maxalliga ah oo aad u keento nuqul aad u maleyneyso inuu dhowaan ku jiro qaabeynta aad tixgelisay
Sidee loo sameeyaa? Fudud weedha soo socota:
Sida aan had iyo jeer idhaahdo, ha rumaysan wax walba, sidaa darteed waxaan kugu martiqaadayaa inaad ka akhrisato isha rasmiga ah. Waxaan kugula talinayaa inaad aqriso buuga weedhan Halkan
Xukunka dib u cusbooneysiin Had iyo jeer waxay ahaan doontaa calaamadeena inaan ku darno cabbiro cusub keydka.
Muhiim, liisaskaaga khasnadaha ah waa inay ahaadaan kuwo isku xigxiga, maxaa yeelay marka ay la mid noqoto midka ugu horreeya ee shay u dhigma, ma sii wadi doono akhrinta xeerarkaaga kale.
Tilmaamaha joogtada ahi waa kuwo xasaasi u ah kiiska, sidaa darteed flv la mid ma aha FLV, laakiin waad iska ilaalin kartaa tan haddii aad rabto adoo adeegsanaya ikhtiyaarka -i . Markaa waxay u ekaan lahayd sidan dib u cusbooneysiin -i
'Min': Waa waqtiga (daqiiqadaha) shay loo qaadan doono inuu yahay "mid dhoweyd ama mid cusub" iyo haddii aanu lahayn sumad cad oo ah "dhacay". Markaad eegto squid waxay kugula talineysaa inuu noqdo 0, sababo la xiriira in qaar ka mid ah codsiyada firfircoon ay u dhaqmi karaan si la yaab leh, saafi ah blah blah blah, runtii qiimahaani waa inuu noqdaa tiro aad u aragto inay waxtar iyo waxtar u leeyihiin canaasiirta aad rabto inaad kaydiso, tusaale: jpg, 1440 daqiiqadood (maalinti) waxay ila muuqataa inay fiicantahay aniga, maahan sida haddii sawirada boostada ay isbadalaan 5tii daqiiqaba bog.
'Boqolkiiba' Waa boqolleyda da'da shay (laga bilaabo beddelka ugu dambeeya) ee loo tixgelin doono «dhowaan ama cusub». Aan sharaxo, laga yaabee inaan sameeyo dib-u-soo-celin joogto ah ama dib-u-cusbooneysiin si aan u arko isbeddelladii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay bogga, squid wuxuu tixgelin karaa haddii uu horey u lahaa, waxaad dhahdaa, 50% waqtiga la dhammeeyey min y max, dib u soo dejiso sheygaas internetka oo nuqul cusub ku sii.
'Max' waa xadka kor ku xusan ama u dhigma 'Min' intee in le'eg ayaa loo tixgeliyaa shay «dhawaa ama cusub», ka soo qaad in sawir bog ka mid ah uu mar kaliya la tashaday isticmaale, shaygaas ayaa horay u gaadhay waqtigiisa min, laakiin maahan max, ka dibna marka mar labaad la weyddiisto, nuqul keyd ah ayaa la geynayaa.
Ikhtiyaarradan waxaa loo sameeyay badiyaa in la iska indhatiro dabeecadaha horay loo aasaasay ee luqadaha iyo borotokoolka, si loo damaanad qaado isticmaalka waxtarka leh ee keydka.
Waxay fulisaa waqtiga ugu yar ee shay, xitaa marka adeeguhu soo diro waqti dhicitaan kayar (tusaale waxyaabaha sida madax ama Kaadh-Xakamaynta: da'da ugu badan). Haddii aan sidan yeelno, "digniin" ayaa soo muuqan doonta oo leh sidan oo kale "VIOLATES the HTTP standard" laakiin taasi waa digniino aan iska indho tiri karno. Hadda haddii waqtiga uu adeegu soo diro uu ka dheer yahay markaa xayawaanku wuxuu qaadan doonaa waqtiga (dhacayo) ee server-ka
Waxay xoojineysaa waqtiga ugu yar ee shay, xitaa haddii sheygaas dhawaan wax laga beddelay.
Sharaxaadda gaaban ayaa ah inay ka hortageyso markii aan riixno badhanka cusbooneysiinta ama aan sameyno codsi-aan-cache, squid wuxuu keenayaa keyd haddii aan "la beddelin tan iyo" ama haddii aysan jirin "madax" bogga.
Iska dhaaf ficilka isticmaalayaasha si aad u riixdo badhanka bogga ama cusbooneysiinta
Ha iska indhatirin sharci kasta oo ku jira madaxyada si aan loo kaydin, tusaale ahaan fiidiyowyada
Ha iska indhatirin xeerar kasta oo ku jira madaxyada waxyaabaha ku jira ee gaarka loo leeyahay oo aan la kaydin karin, tusaale: waxyaabaha ku jira facebook.
Squid waxay la xiriirtaa adeegaha, si loo hubiyo in shaygu yahay kan ugu cusub. Hadday markaas tahay waxay geyn doontaa keyd
Squid waxay badbaadin doontaa dhammaan jawaabahaas, xitaa haddii aysan haysan taariikh uu dhacayo, tani waa mid aan macquul ahayn maadaama aan badanaa dib loo isticmaali karin. Haddii aad go'aansato inaad awood u yeelato waa inaad ku dhawaaqdaa max-stale = NN
Haddii aad karti u siisay waxa kor ku xusan, waa inaad ku dhawaaqdaa ugu badnaan cimri ahaan jawaabtaas ama qodobkaas. Squid ma keento walxaha qaabkan laakiin way ku ansaxin kartaa isha
Halkan waxaa ku yaal jadwal sida gobolka "FARXAD" u shaqeeyo iyadoo loo eegayo qiyamka aan ka soo hadalnay:
FARH haddii uu dhacayo> hadda, kale XADGUDUB
XADGUDUB haddii da'diisu tahay> max
FARTA haddii lm-factor <boqolkiiba, kale STALE
FARXAD haddii da '<min kale XADGUDUB
Halkan waxaa ah qaabeynta qaabeynta shirkad gaar ah oo leh meel fara badan oo disk ah, qalab wanaagsan iyo xawaare ballaadhan
Hadda kaydku kuma eka kaliya diskiga adag, waxaan sidoo kale kaydsan karnaa xusuusta wan, qiimahan waxaa loogu talagalay geeddi-socod kasta oo sagxad ah, marka waa inaad tixgelisaa marka aad isticmaaleyso dib u habeyaasha sida xayooGuard
Cabirka ugu badan ee sheyga ku jira xusuusta oo xayawaanku ku kaydin doono RAM. Waxaad sidoo kale sheegi kartaa ugu yaraan.
Sida aad u arki karto, mid ayaa ah siyaasadda beddelka keydka xusuusta RAM iyo mid kale oo diskiga adag ku jira. Waxaa jira 2 siyaasadood GDSF iyo LFUDA. Midka hore wuxuu doonayaa inuu hagaajiyo boqolkiiba inta ku kaydsan khasnadaha, isagoo gacanta ku haysta walxo yaryar oo badan, kan labaad wuxuu raadinayaa ka soo horjeedka, wuxuu ku hayaa walxaha khasnadda iyadoo aan loo eegin cabirkooda.
Su'aasha aan qiyaasayo inaad i weydiineyso waqtigaan ayaa ah, maxaan u adeegsadaa? Hagaag, hadaad ka fiirsato taas deegaankaaga waxay ku sameeyaan su'aalo badan oo wax yar oo soo degsadana waxay isticmaalaan GDSF haddii ay taasi lid ku tahay waxay sameeyaan soo degsiimo badan iyo weydiimo yar oo LFUDA ah. Taasi haddii aan kugula taliyo LFUDA goorta aad sameyn doontid, ma ogi, in lagu keydiyo 1TB disk ah, waa ka waxtar badan tahay.
Cabirka ugu badan ee shey uu yeelan karo in la keydiyo
Halka keydku ku kaydsan doono, halkaan fiiro gaar ah, muhiimna waa haddii aad isticmaasho ufs, aufs ama diskd, dhamaan 3du waxay shaqeeyaan wax kabadan ama kayar isku mid, farqiga ayaa ah in aufs iyo diskd ay lashaqeeyaan habab kaladuwan oo lagu sameeyo howlaha I / O ee diskiga adag iyo iska ilaali in howlaha jilaabku ay sudhan yihiin inta lagu jiro hawlgalladaan, waxaa sii dheer diskd waad sheegi kartaa tirada dunta ee aad ku yeelan doonto hawshan. Waxaan kugula talinayaa aufs haddii aad leedahay koox fiican.
Qiyaasta 100 (megabytes), waxaad gelin kartaa 100000 waxay ku dhowdahay 100GB waxay kuxirantahay helitaankaaga. 16 waa tirada galka, 256-na waa tirada faylal hoosaadyo. Waad ku ciyaari kartaa labada qiimahood waxay kuxirantahay sida dhakhsaha badan ee ay saxamadaadu usocoto iyo inta ilaha aad haysato.
Ikhtiyaarradan ayaa ah qiimaha beddelka sheyga, waa qiimaha ugu yar iyo kan ugu sarreeya ee astaan-biyood ahaan marka loo eego squid, halkaasoo tirooyinkan ay boqolley yihiin (%), iyo keyd aad u yar, 5% sidan oo kale ah hadda waxay noqonaysaa aan dhahno 300 walxaha halkii labaad , laakiin keydadka aad u waaweyn waxaan ka hadlaynaa kumanaan MB
Hagaag, halkaas ayaan kaaga tagayaa, tan hada, faallo iyo sidoo kale tixgelin siiya kuwa ii sheegay in aysan kaydin karin oo ay ku shaandheyn karaan bogagga https (SSL) ee squid 3.5 ama wixii ka sareeya, dhawaan ayaan kuu keeni doonaa, la soco boggan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Kayd biyo ah - qayb 2
Dhammaystir fiican qaybta hore!
Waxaa jira suugaan badan oo ku saabsan Squid, laakiin u soo helida barta xulashooyinka ugu wax ku oolka ah oo leh sharraxaaddooda iyo xaaladaha dhabta ah ee suurtagalka ah ee isticmaalka dhabta ah had iyo jeer ma jiraan gacanta!
Sida had iyo jeer, waxaan rajeynayaa qaybta saddexaad ee ka mid ah!
Waad ku mahadsantahay faalladaada. Waa sax, sharaxaad kooban oo ku saabsan dhammaan walxaha khuseeya, iyo qaab u dejinta ugu fiican. Si kastaba ha noqotee waxaan marwalba dhegta u dhigaa faallooyinkaaga iyo khibradahaaga.
Waad salaaman tahay, waxaan dhibaato ku qabaa cusbooneysiinta daaqadaha iyo antivirus. Waxaan ku leeyahay qiyaastii 120 pc hay'addayda. Ma i siin kartaa fikrad ah sida loo hagaajiyo xaaladdan. Waad ku mahadsantahay kaalmadaada iyo hambalyo ku saabsan maqaalka.
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay kaqeybgalka .. si fiican haddii aan kaa caawin karo, laakiin si fiican u sharax waxa dhibaatadaadu tahay, ma soo dejisan kartaa cusbooneysiinta? Ma ku dhigtay wakiilo xulashooyinka internetka oo isku mid ah xulashooyinka wakiil ee biraawsarkaaga? Miyaad hubisay dekedaha? Mise waxaad rabtaa inaad kaydiso cusboonaysiintaas?
Waxa aan u baahanahay ayaa ah mar kasta oo kumbuyuutar soo dejinayo daaqado ama cusbooneysiinta antivirus, waxay ku sii jirtaa keydka muddo qiyaastii hal bil ah, sidan ayaan jeclaan lahaa inaan ku badbaadiyo baaxadda, tan iyo subax kasta markasta kombiyuutarada oo dhan waxay bilaabaan inay soo dejiyaan isla cusbooneysiinta mid kasta iyo isku xidhka saturates.
Server leh Squid wuxuu u shaqeeyaa, maadaama kuwani ay yihiin soo degsasho fudud oo aan qarsoodi ahayn oo http ah. Xalalka kale ee keydku waa WSUS iyo Altiris, waa iska caadi shirkadaha.
Mahadsanid Mario maskaxda ayaan ku hayn doonaa.
ok diyaar, waan fahmay, hubi xiriiriyahan. http://wiki.squid-cache.org/SquidFaq/WindowsUpdate. si aad u kaydiso antivirus, waa inaad ogaataa halka laga cusbooneysiiyo cusbooneysiinta iyo hoosta kordhinta (tusaale .exe) oo ku kaydi ...
Subax wanaagsan saaxiibayaal, ma igu taageeri kartaan kiiskeyga. tan iyo markii aan kujiray 2.7 .STABLE9 on debian 6, oo waxaan hayaa wax kasta oo la habeeyay iyo markaan ku dhejinayo 10 pc deegaan, waxaan helayaa boostada caadiga ah, dhibaatadu waxay jirtaa markii aan ku dhejiyo 90 pc, waxay qaadataa oo keliya dhowr ilbiriqsi oo ka shaqeynaya halkaasna qof walba waa internet la’aan bay ku hadheen. Ma i taageeri kartaa?
Sharaxaad wanaagsan, aasaasi ah laakiin aad u cad oo sax ah. Shakhsiyan sharaxa ugu fiican ee aan awooday inaan akhriyo.
Waxaan qabaa su'aal, suurta gal ma tahay in la kaydiyo barnaamijyada Android sida apk iyo xapk?
Iyo maxay noqon laheyd habka saxda ah ee lagu kaydin karo keyd firfircoon waxkastoo asalka u ah feylasha?
Waxaan isticmaalaa pfSense 2.4.5.
Ku jawaab JOSE RIVAS